Ederede Anastasia Sviridenko na Martech Zone |
Edemede site na Anastasia Sviridenko
Ọ dị ka bọtịnụ nke oge a. Ewezuga na ọ na-eme ihe ọ bụla ụlọ ọrụ nke oge gara aga enweghị ike. Ederede ederede dị ka ụzọ dị mfe, kwụ ọtọ ma dịkwa irè iji mezuo ihe ọ bụla na azụmaahịa taa. Ndị edemede si Forbes na-akpọ ahịa ozi ederede ederede na-esote. Ma ọ bụ nke ị na-achọghị ịhapụ n'ihi na mkpa nke mkpanaka na ahịa dijitalụ nke oge a dị oke mkpa. Nnyocha na-egosi na 63% nke ndị ọrụ Smartphone na-edebe ngwaọrụ ha